Home » Africa » Liverpool Oo Culayska Ku Kordhisay Tabbobare Bilic
Mohamed Salah ayaa laba gool ka dhaliyey kulan kooxda Liverpool si xarago leh ugu karbaashtay naadiga West Ham, culayskana ugu sii siyaadisay tabobare Slaven Bilic.
Salah ayaa hogaanka u dhiibay kooxdiisa qaybtii hore ee ciyaarta markii uu kubadda xoog ku daba mariyey goolwade Joe Hart oo naadigiisa Dubeyaasha lagu naanaysaa ay ku fashilantay weerar deg-deg ah oo ay qaaday.
Dhar castu waxay hogaanka labeeyeen wax yar kadib goolka furitaanka markii Joel Matip uu kubad difaaca ka soo booday meel goolka afkiisa ah shabaqa kaga celiyey.
Manuel Lanzini goolkii uu shabaqa ku ruxay wuxuu ku rajo abuuray naadiga martida loo ahaa, laakiin goolkii koobaad ee Alex Oxlade-Chamberlain uu Liverpool ugu dhaliyo horyaalka Premier League ayaa kooxda martida ahi kula soo noqotay labadii goo lee ay hogaanka ciyaarta ku haysay, ka hor intii aanu kubad xoogan mar kale Salah ku shubin kaas oo xaqiijiyey guusha Liverpool.
Guushii shanaad ee ay Liverpool ka gaadho Premier League xili ciyaareedkan, waxay kooxda tabobare Jurgen Klopp ku hogaamisay kaalinta lixaad inay fadhiisato, halka West Ham ay ka fadhido kaalinta 17aad, dhibic kaliyana ka sarayso diilinta hadhitaanka.
Dhibcaha sagaalka ah ee West Ham ka urursatay 11 ka ciyaarood ee ay yeelatay guud ahaan, waxay kula mid noqotay dhibcihii ay ka heshay xili ciyaareedkii 2010-11 sanadkaan oo ay horyaalka heerka koowaad salaankiisa ka siibteen.
“Caddaadisku wuu sii kordhayaa ciyaarba ciyaarta ka dambeysa, wakhti xaadirkana cirkaasuu marayaa,” ayuu tabobare Bilic, oo 49 jir ah ku yidhi warfidiyaha BBC Sport, ciyaarta kadib.
“Weynu eegi doonaa waxay naadigu iga yeelaan, naadiga ayaa cid walba ka sareeya.”
Filed in Africa England Wararka Maanta
Barcelona vs Sevilla 2-1 – All Goals & Extended Highlights – La Liga